Endrik'io pejy io tamin'ny 7 Oktobra 2020 à 18:52
2 431 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 7 Oktobra 2020 à 18:12 (hanova)
(Zavatra tsy manitsy tanterahin’ny mpino silamo)
Endrik'io pejy io tamin'ny 7 Oktobra 2020 à 18:52 (hanova) (esory)
Ny '''andry dimin’ny finoana silamo''' dia adidy miisa dimy izay tsy manitsy tanterahin’ny mpino silamo. Atao hoe ''arkanarkān'' izany amin’ny [[teny arabo]]. Ireto avy izy ireo: 1. Manonona ny [[fiekem-pinoana]] na ''shahada''; 2. Manatateraka ireo vavaka dimy fanao isan’andro (''salat'') izay ialohavan’ny fidiovana (ablution) ; 3. Mifady hania amin’ny volana [[Ramadany]] (''sawm'') ; 4. Manao asa fiantrana (''zakat''); 5. Manatanteraka [[fivahiniana masina]] (''hadj'') any amin’ny tanàna masin’i [[Maka (any Arabia Saodita)|Maka]], amin’ny fotoana maha afaka ara-batana sy ara-bola ny mpino. Ny Sonita no tena manaja ireo isa dimy ireo ka tsy anampy andry hafa.
Amin’ny ankamaroan’ny firenena silamo dia tsy voasazy ny mpino raha tsy mahatateraka manontolo ireo zavatra dimy tsy maintsy atao ireo. Nefa amin’ny firenena na fanjakana sasany, ny fandavana ampahibemaso ny maha manan-danja na ny maha zava-dehibe ireo andry dimy ireo dia heverina ho [[fandavana ny finoana]] ka mahavoaheloka ho faty.
Manaja ireo andry dimy ireo ny Sonita izay maro an'isa, fa ny sampana hafa dia mitsipala izany, ka isan'izay ny [[Karijisma|Karijita]] sy ny vondrona vitsy an'isa [[Siisma|siita]] hafa. Tsy voafetran'ireo dimy ireo ny zavatra tsy mantsy ataon'ny [[Sonisma|Sonita]], nefa ny fampiharana azy ireo dia tsy azo ialana.
== Ny fiekem-pinoana na ''Shahâda'' ==▼
== Ny fiavan'ireo andry dimin'ny finoana silamo ==
Ny nandraiketana ny isan'ireo andry ireo ho dimy dia mampahatsiahy ny voasoratra ao amin'ny hadita hoe "Miorina amin'ny andry dimy ny finona silamo"<ref><small>Rapporté par al-Bukhârî (1/49) (<abbr>no</abbr> 8) et Muslim (1/45)(<abbr>no</abbr> 1) d'après Abu 'Abd ar-Rahman 'Abdullah ibn 'Omar.</small></ref>.
Ny Miozolmana rehera dia tokony hanaja ireo zavatra tsy maintsy atao amin'ny fanompoam-pivavahana izay azo omena ny anarana hoe "andrin'ny finoana silamo" ([[Fiteny arabo|arabo]] : أركان الإسلام / ''arkān al-Islām'')<ref><small>"[http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1859 Pillars of Islam]", ''The Oxford Dictionary of Islam'', Éd. John L. Esposito, Oxford Islamic Studies Online, 6 août 2016. ([http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.oxfordislamicstudies.com%2Farticle%2Fopr%2Ft125%2Fe1859 Tahiry])</small></ref>. Avy ao amin'ny [[Kor'any]] irao didy ireo nefa ny fametrahana azy dia nandeha tsikelikely andritra ireo taonjato voalohany nisian'ny fivavahana silamo. Ohatra amin'izany ny endriky ny ''Shahada'' izay nivoatra taorian'ny nahafatesan'i [[Mohamady]] <ref><small>Édouard-Marie Gallez'', Le messie et son prophète'', Aux origines de l'islam, Éditions de Paris, vol. 1, <abbr>p.</abbr> 488.</small></ref> sy ny endika sasn'ny ''Salat'' izay mbola niadian-kevitra taminy taonjato faha-4. Amin'i Amir-Moezzi dia manam-piaviana [[Manikeisma|manikeana]] ny efatra amin'ireo andry dimy ireo, afa-tsy ny maha tokana an' Adriamanitra<ref><small>"[http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/le-coran-silencieux-et-le-coran-parlant-30-11-2011-2045_110.php Le Coran silencieux et le Coran parlant]" [[http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.lemondedesreligions.fr%2Fsavoir%2Fle-coran-silencieux-et-le-coran-parlant-30-11-2011-2045_110.php tahiry]], ao amin'ny www.lemondedesreligions.fr (nozahana tamin'ny 12 Avrily 2018)</small></ref>.
== Ny andry dimin'ny finoana silamo ==
▲=== Ny fiekem-pinoana na ''Shahâda'' ===
Ny andry voalohan’ny finoana silamo dia ny fiekem-pinoana izay atao hoe ''Shahâda'': “''La ilaha illa Allah, Mohammadour rasoulou Allah” (“Tsy misy andriamanitra afa-tsy i Allah ary i Mohamady no Irany”.'' Izany fiekem-pinoana izany, izay ambara rehefa miova ho amin’ny fioana silamo ny tena na tononina farany eo am-pialana aina, dia tokony ataon’ny Miozolmàna rehetra ampahibemaso fara-fahavitsiny indray madeha ao amin’ny androm-pianany. Ny fanonona ny shahada dia tsy fanamnatàna fotsiny ny maha Miozolmàna, indrindra amin’ny fotoana iovana ho mozolmàna, fa maneho koa mpahany amin’ny fiantsoana hivavaka (''Adhân'').
=== Ny vavaka na ''Salat'' ===
Ny vavaka na ''Salat'' no andry faharoa ao amin’ny finoana silamo. Atao hoe ''namaz'' koa izany any [[Iràna]], any [[India]] ary any [[Torkia]]. Ny vavaka no ahafahan’ny mpino silamo manambara tsy misy mpanelanelana ny fitsaohany an’ Andriamanitra. Isan’andro dia tokony manatanteraka ireo vavaka dimy tsy maintsy atao ny mpino. Tsy atao anefa izy ireo raha tsy efa vita ny fombafomba fidiovana ary misy filaharana tsy maintsy arahina amin’ny fizarazaràn’ny andro voafaritra mazava tsara:
Ny [[Siisma|Siita]] dia mamela malalaka ny fanambarana ny vavaka tokony atao amin’ny mitataovovonana sy ny tolakandro, toraka izany koa ny vavaka alohan’ny fiposahan’ny masoandro sy ny misasakalina, ka afaka mivavaka in-telo fotsiny isan’andro izy ireo. Na aiza na aiza no anaovana ny vavaka dia tsy maintsy misy fomba fitoetra atao miaraka aminy, dia ny mitsangana mitodina mankany amin’ny Kaaba sy miondrika ary mandohalika araka ny fombafomba voafaritra mazava tsara.
=== Ny fiantrana ny tsy manana na ''Zakat'' ===
Andry fahatelo ny fiantrana ny tsy manana, izay atao hoe ''Zakat'' (midika hoe “fanadovana”) izay ahafahana manadio ny harena azon’ny mpino sady miaro azy amin’ny fitiavam-bola tafahoatra, amin’ny fitsiriritana ary ny faniriana tafahoatra. Izany fiatrana izany dia azo alaina isan-taona amin’ny vokatry ny fambolena na ny fiompiana na ny vato saro-bidy na ny vola, dia amin’ireo izay manana harena mihoatra ny ampy tokony hahafahany mivelona soa aman-tsara ary izay tsy manana trosa mihoatra ny eo am-pelan-tanany. Amin’ny ankamaroan’ireo firenena miozolmana dia lasa asa fiantrana an-tsitrapo ny ''zakat'' ho an’ny mahantra, sady ho an’ireo vao avy niova ho amin’ny finoana silamo sy ho an’ireo bokan-trosa sns.
Nanomboka tamin’ny fiafaran’ny [[Andro Antenantenany]] dia nampanangona hetra tamin’ny alakan’ireo mpahay lalanany ireo Siita natanjaka sy nanjaka, amin’ny maha solon-tenan’ny imam azy ireo.
=== Ny fifadian-kanina na ''Sawm'' ===
Andry fahefatra ao amin’ny finoana silamo ny fifadian-kanina, izay atao hoe ''Sawm''. Voasoratra ao amin’ny [[Kor'any]] izany ao amin’ny Soràta 2.183. Mandritra ny volana [[Ramadany]] no tsy maintsy anaovana izany ka ireo Miozolmana olon-dehibe sy salama tsara no didiana hanao azy. Manombola amin’ny magiran-dratsy ka hatramin’ny filentehan’ny masoandro dia tsy azon’ny mpifady hania atao ny misotro zavapisotro sy ny mihinana sakafo ary ny manao firaisana amin'ny vady. Ny marary sy ny vehivavy mampinono dia tsy terena hifady hanina nefa asaina mifady hanina hanonitra izany amn’ny fotoana hoavy.
=== Ny fivahiniana masina mankany Maka na ''Hadj'' ===
Andry fahadimy ao amin’ny finoana silamo ny [[fivahiniana masina]], izay atao hoe ''Hadj''. Ny ''Hadj'' no manan-danja indrindra amin’ireo fivahiniana masina roa mankany [[Maka (any Arabia Saodita)|Maka]]. Ny lehilahy sy ny vehivavy miozolmana salama tsara rehetra dia tokony hanao fivahiniana masina indray mandeha amin’ny fotoana ahavelomany, raha tahiny ka ampy ny hoenti-manana ara-bola hiatrehana izany. Tsy mitovy amin’ny “fivahiniana masina kely” any Maka, izay atao hoe ''Umra'', ny ''Hadj'' izay azo atao amin’ny fotona sasany voafatritra mazava: amin’ny volana fahafolo no manomboka ireo lanonana isam-batanolona voalohany, izay andehanana impito manodidina ny [[Kaaba]] sy impito eo anelanelan’ny tendrombohitra Safa sy ny tendrombohitra Marwa; avy eo; eo anelanelan’ny andro faha-9 sy fgaha-12 amin’ny volana faha-12 (volana ''dhul al-Hijja''), ny lanonana iarahan’ny besinimaro izay ivorian’ny mpanao fivahinina masina rehetra, ao amin’ny lohasaha manatrika ny tendrombohitra Mina tsy lavitra an’i Maka, izay naovana [[sorona]] biby fiompy. Ireo izay manatanteraka ny ''Hadj'' dia afaka mametraka ny anaram-boninahitra hoe “''Hadj''” eo alohan’ny anarany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/997701"